तीर्थ श्रेष्ठका गीतहरू पढेपछि
समकालीन नेपाली कविताको क्षेत्रमा तीर्थ श्रेष्ठ परिचित नाम हो। उनका कविताहरू यति सरल र शक्तिशाली छन् –धेरैलाई उनका धेरै कविता कण्ठै हुनछ। साहित्यकार हरिबहादुर श्रेष्ठको शब्दमा उनका कविताहरूमा मन र मस्तिष्कको सुयोग भएकाले नै उनका काव्य रचनाहरूको उचाइ बढिरहेको छ।
तिनै कवि श्रेष्ठद्वारा रचिएका गीतहरूको सङ्कलन 'मेरै हिमालजस्तो' ले उनको काव्यिक व्यक्तित्वको फराकिलो आयाम उजिल्याएको छ। 'नेपाली सङ्गीतका शिखरपुरूष अम्बर गुरूङ' प्रति समर्पित कृतिमा सङ्कलित गीतहरूले समाज, प्रेम, प्रकृति, मानवीय स्वभावको बृहत् क्षेत्र समेटेको छ।
गीतहरूमा जति गहन सन्देश छ, त्यति चोटिलो व्यङ्ग्य पनि छ।
'यो कस्तो हुरी चल्यो मन्दिरको गजुर ढल्यो
कहाँ गए देवीदेवता मनभरि आगो बल्यो।'
अभिव्यक्ति यति सुन्दर पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा उनका गीत पढ्दा महसुस हुन्छ।
'जसै तिमीले छोयौ मलाई म फूल भएँ
धरती र आकाश जोडिदिने पुल भएँ।'
समाजका विसङ्गतिविरूद्ध उनी गतिमा विद्रोही आवाज पनि बोलिरहेका हुन्छन्। निरङ्कुश शासनका आततायी व्यवहारविरूद्ध उनका गीतले भूकम्प निम्त्याउन सक्छन्। कवि श्रेष्ठ लेख्छन् –
'सत्यको मुख थुनिएको छ, झरनाहरू बोल
झूटको दुर्गन्ध फैलिएको छ, पहाडहरू बोल
अझै अँध्यारोमा छन् मान्छेका बस्तीहरू
असहनीय छ, छातीमा बुट गाउँघरमा गस्तीहरू
मौनताको गति धेरै भयो अब त बोल
पाशविकतामा समर्पित छैनौ भने सत्य बोल।'
प्राकृतिक सुन्दरताले छपक्क छोपिएको पोखराका बासिन्दा तीर्थ श्रेष्ठका गीतहरूमा प्रकृतिका बिम्ब पहाड, झरना, हिमाल,नदी, ताल कहीं न कहींबाट आइरहेको हुन्छ।
कवि श्रेष्ठका गीतहरू नेपथ्य समूह, फत्तेमान सिंह, आभासजस्ता लोकप्रिय गायक र सङ्गीत समूहले गाइसकेका छन् र धेरै युवाहरूको मुख मुखमा झुण्डिएको छ। यसले श्रेष्ठलाई युवाहरूको मन–मनमा लोकप्रिय बनाइरहेको छ।
कवि श्रेष्ठले आगामी दिनमा पनि देशभक्तिपूर्ण मानवीय भावनाले ओतप्रोत, विद्रोही गीतहरू लेखेर नेपाली समाज परिवर्तनमा योगदान गर्नेछन्। श्रेष्ठका सुन्दर रचना एकै ठाउँमा समेटी मूल्यवान कृति प्रकाशन गरेकोमा पोखरेली युवा सांस्कृतिक परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद!
भक्तपुर अस्पताललाई सिफारिस केन्द्र होइन उपचार केन्द्र बनाउनुपर्ने
माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको विरोधमा नेमकिपाको अपिल
के सबैको सहमतिमा संविधान बन्न सम्भव छ?
युनिभर्सिटी बुलेटिन पूर्णाङ्क २८ पढ्दा
पार्टी सम्मेलनलाई राजनीतिक कक्षाको रुपमा लिनुपर्ने
शासक दलहरूको जुँगाको लडाइँले संविधानसभा धरापमा
इञ्जिनियर समाज नेपालको प्रशंसनीय मुखपत्र
'दसवर्षे कृषि विकास रणनीतिबारे नेमकिपाको धारणा
धम्की र घुर्कीको राजनीति कहिलेसम्म?
1 ...567 8910 11 12 13 14 ... 61